နာမည်ကြီး DJ ပညာရှင် Avicii အသက် ၂၈ နှစ်မှာ ကွယ်လွန်
21 Apr 2018 . 6:20 AM
ဆွီဒင်လူမျိုး နာမည်ကြီး DJ ပညာရှင် Avicii (နာမည်အရင်း Tim Bergling) ဟာ အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့မွန်းလွဲချိန်မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်သတင်းကြေငြာချက်တွေ ထွက်လာပါပြီ။
“သူသေဆုံးသွားပါပြီလို့ ဒီလိုကြေငြာရတာ တော်တော်လေးဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းတဲ့ စကားပါ။ သူဟာ ဒီနေ့လည်ခင်းမွန်းလွဲချိန်ကဘဲ Muscat, Oman မှာ ကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုတစ်ခုလုံး ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေကြတာမို့ ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ သူတို့ရဲ့ Privacy ကို နားလည်မှုထားပေးပါ။ လတ်တလောတော့ ဒီလောက်ပါပဲ” ဆိုပြီး Avicii ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Diana Baron က ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
Avicii ဟာ ၂၀၀ဝပြည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းတွေမှာ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးဂီတ ကို စတင်ဖြန့်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲ့နောက် 2011 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိလာတဲ့ “Levels” ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ ဇာတိမြေ ဆွီဒင်မှာ နံပါတ်တစ်ချိတ်ခဲ့ရုံသာမက U.S Billboard Dance Club Song Chart တွေမှာပါ အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 2012 မှာ DJ Artist တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ David Guetta နဲ့တွဲဖက်ပြီး ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ “Sunshine” ဆိုတဲ့ Track ရဲ့ အောင်မြင်မှုကလည်း Grammy စာရင်းမှာထိလျာထားခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။
2013 မှာတော့ “True” ဆိုတဲ့ Studio Albumn ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး အဲ့ဒီ့ Albumn ထဲမှာ Aloe Blacc နဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့ “Wake me up” ဆိုတဲ့သီချင်းဟာ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ နံပါတ်တစ်ချိတ်တဲ့အပြင် Billboard Hot 100 Songs မှာ နံပါတ် ၄ ချိတ်တဲ့အထိ အံ့မခန်း ပရိသတ်အားပေးမှုအကြီးအကျယ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယ Albumn “Stories” ကိုတော့ ၂၀၁၅ မှာထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ မှာ Rita Ora နဲ့ Collaboration ဖြစ်တဲ့ “Lonely Together” ကို ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
NEW YORK, NY – OCTOBER 01: Avicii performs at the MLB Fan Cave on October 1, 2013 in New York City. (Photo by Mike Lawrie/Getty Images)
သူ့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုတော့ ခုလိုမကွယ်လွန်ခင်အထိ ဟိုးယခင်တည်းက ပရိသတ်အများအပြားသိနေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အရက်အလွန်အကျွံသောက်မှုကြောင့် ပြင်းထန်တဲ့ ပန်ခရိယရောဂါကို ခံစားနေရတာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၄ မှာ အဲ့ဒီ့ရောဂါကြောင့် သည်းခြေအိတ်နဲ့ အူအတက်ဖယ်ထုတ်လိုက်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် နိုင်ငံအနှံ့အပြားက သူ့ရဲ့ Show ပွဲတွေအားလုံးကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ရပါတယ်။
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ပရိသတ်အတွက်စာတစ်စောင်အရ Avicii ဟာ သူ့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် Tour တွေအားလုံးလှည့်လည်ဖျော်ဖြေခြင်းကို တဖြည်းဖြည်း အနားယူတော့မှာဖြစ်ပြီး “ဒါတွေအားလုံးရဲ့ အကြောင်းရင်းက ကျွန်တော့် ဂီတတွေ၊ Show ပွဲတွေကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုက သဘာဝမကျ၊ အဆင်မပြေဘူးလို့ ခံစားရလို့ပါ။ အနုပညာရှင်၊ ဂီတပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ရပေမယ့် ပုံမှန်ကျွန်တော့်သွင်ပြင်ဟာ အများနဲ့အမူအကျင့်မတူဘဲ သီးခြားနေထိုင်တတ်တဲ့ Introvert တစ်ယောက်ပါ။ ဒါတွေအားလုံးဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ဖြတ်သန်းရတော်တော်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်” လို့ သူက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် အောင်မြင်မှုတွေရနေဆဲအချိန်မှာ လူ့လောကထဲက စွန့်ခွာခဲ့ရတာကတော့ နှမြောတသစရာပါပဲ။ ခုဆိုရင် နိုင်ငံအနှံ့အပြားက DJတွေ၊ အနုပညာရှင်တွေ၊ ပရိသတ်တွေတိုင်းက သူ့အတွက် ရေးထားတဲ့ အောက်မေ့သတိရစာတွေဟာ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာတော့အပြည့်ပါပဲ။
ရောဂါအခြေအနေကြောင့်သေဆုံးမှုလား၊ တခြားအကြောင်းအရင်းတွေရှိနေသေးလားဆိုတာ သေချာမသိရသေးပေမယ့် သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ သူဖန်တီးခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေကို ပြန်လည်နားထောင်ရင်း သူ့ဂီတအနုပညာကို လွမ်းဆွတ်တမ်းတနေကြတော့မှာ အမှန်ပါပဲ။
Ref.Billboard.com (Photo credit)
နာမညျကွီး DJ ပညာရှငျ Avicii အသကျ ၂၈ နှဈမှာ ကှယျလှနျ
ဆှီဒငျလူမြိုး နာမညျကွီး DJ ပညာရှငျ Avicii (နာမညျအရငျး Tim Bergling) ဟာ အသကျ ၂၈ နှဈအရှယျ ဧပွီလ ၂၀ ရကျနမှေ့နျးလှဲခြိနျမှာ ကှယျလှနျသှားပွီဖွဈကွောငျး တရားဝငျသတငျးကွငွောခကျြတှေ ထှကျလာပါပွီ။
“သူသဆေုံးသှားပါပွီလို့ ဒီလိုကွငွောရတာ တျောတျောလေးဝမျးနညျးဖှယျကောငျးတဲ့ စကားပါ။ သူဟာ ဒီနလေ့ညျခငျးမှနျးလှဲခြိနျကဘဲ Muscat, Oman မှာ ကှယျလှနျသှားတာဖွဈပါတယျ။ မိသားစုတဈခုလုံး ဝမျးနညျးကွကှေဲနကွေတာမို့ ဒီလိုခကျခဲတဲ့အခွအေနမြေိုးမှာ သူတို့ရဲ့ Privacy ကို နားလညျမှုထားပေးပါ။ လတျတလောတော့ ဒီလောကျပါပဲ” ဆိုပွီး Avicii ရဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ Diana Baron က ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။
Avicii ဟာ ၂၀၀ဝပွညျ့နှဈနှောငျးပိုငျးတှမှော သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးဂီတ ကို စတငျဖွနျ့ဝခေဲ့တာဖွဈပွီး အဲ့နောကျ 2011 ခုနှဈမှာ ထှကျရှိလာတဲ့ “Levels” ဆိုတဲ့ သီခငျြးနဲ့ ဇာတိမွေ ဆှီဒငျမှာ နံပါတျတဈခြိတျခဲ့ရုံသာမက U.S Billboard Dance Club Song Chart တှမှောပါ အောငျမွငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ 2012 မှာ DJ Artist တဈယောကျဖွဈတဲ့ David Guetta နဲ့တှဲဖကျပွီး ထုတျဝခေဲ့တဲ့ “Sunshine” ဆိုတဲ့ Track ရဲ့ အောငျမွငျမှုကလညျး Grammy စာရငျးမှာထိလြာထားခွငျး ခံခဲ့ရပါတယျ။
2013 မှာတော့ “True” ဆိုတဲ့ Studio Albumn ထုတျဝခေဲ့ပွီး အဲ့ဒီ့ Albumn ထဲမှာ Aloe Blacc နဲ့တှဲဖကျထားတဲ့ “Wake me up” ဆိုတဲ့သီခငျြးဟာ နိုငျငံတျောတျောမြားမြားမှာ နံပါတျတဈခြိတျတဲ့အပွငျ Billboard Hot 100 Songs မှာ နံပါတျ ၄ ခြိတျတဲ့အထိ အံ့မခနျး ပရိသတျအားပေးမှုအကွီးအကယျြရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒုတိယ Albumn “Stories” ကိုတော့ ၂၀၁၅ မှာထုတျဝခေဲ့ပွီး ၂၀၁၇ မှာ Rita Ora နဲ့ Collaboration ဖွဈတဲ့ “Lonely Together” ကို ထုတျဝခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။
သူ့ရဲ့ ကနျြးမာရေးအခွအေနကေိုတော့ ခုလိုမကှယျလှနျခငျအထိ ဟိုးယခငျတညျးက ပရိသတျအမြားအပွားသိနကွေပွီးဖွဈပါတယျ။ သူဟာ အရကျအလှနျအကြှံသောကျမှုကွောငျ့ ပွငျးထနျတဲ့ ပနျခရိယရောဂါကို ခံစားနရေတာဖွဈပွီး ၂၀၁၄ မှာ အဲ့ဒီ့ရောဂါကွောငျ့ သညျးခွအေိတျနဲ့ အူအတကျဖယျထုတျလိုကျရပွီးနောကျပိုငျးမှာတော့ ကနျြးမာရေးအခွအေနကွေောငျ့ နိုငျငံအနှံ့အပွားက သူ့ရဲ့ Show ပှဲတှအေားလုံးကို ဖကျြသိမျးလိုကျရပါတယျ။
၂၀၁၆ခုနှဈ၊ မတျလ ၂၆ ရကျနမှေ့ာ ထုတျပွနျခဲ့တဲ့ ပရိသတျအတှကျစာတဈစောငျအရ Avicii ဟာ သူ့ရဲ့ ကနျြးမာရေးအခွအေနကွေောငျ့ Tour တှအေားလုံးလှညျ့လညျဖြျောဖွခွေငျးကို တဖွညျးဖွညျး အနားယူတော့မှာဖွဈပွီး “ဒါတှအေားလုံးရဲ့ အကွောငျးရငျးက ကြှနျတေျာ့ ဂီတတှေ၊ Show ပှဲတှကွေောငျ့မဟုတျပါဘူး။ ကြှနျတေျာ့ပတျဝနျးကငျြမှာဖွဈပကျြနတောတှကေိုက သဘာဝမကြ၊ အဆငျမပွဘေူးလို့ ခံစားရလို့ပါ။ အနုပညာရှငျ၊ ဂီတပညာရှငျတဈယောကျဖွဈလာခဲ့ရပမေယျ့ ပုံမှနျကြှနျတေျာ့သှငျပွငျဟာ အမြားနဲ့အမူအကငျြ့မတူဘဲ သီးခွားနထေိုငျတတျတဲ့ Introvert တဈယောကျပါ။ ဒါတှအေားလုံးဟာ ကြှနျတေျာ့အတှကျ ဖွတျသနျးရတျောတျောခကျခဲခဲ့ပါတယျ” လို့ သူက ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ငယျငယျရှယျရှယျ အောငျမွငျမှုတှရေနဆေဲအခြိနျမှာ လူ့လောကထဲက စှနျ့ခှာခဲ့ရတာကတော့ နှမွောတသစရာပါပဲ။ ခုဆိုရငျ နိုငျငံအနှံ့အပွားက DJတှေ၊ အနုပညာရှငျတှေ၊ ပရိသတျတှတေိုငျးက သူ့အတှကျ ရေးထားတဲ့ အောကျမသေ့တိရစာတှဟော လူမှုကှနျယကျပျေါမှာတော့အပွညျ့ပါပဲ။
ရောဂါအခွအေနကွေောငျ့သဆေုံးမှုလား၊ တခွားအကွောငျးအရငျးတှရှေိနသေေးလားဆိုတာ သခြောမသိရသေးပမေယျ့ သူ့ရဲ့ပရိသတျတှကေတော့ သူဖနျတီးခဲ့တဲ့ သီခငျြးတှကေို ပွနျလညျနားထောငျရငျး သူ့ဂီတအနုပညာကို လှမျးဆှတျတမျးတနကွေတော့မှာ အမှနျပါပဲ။